idemokhrasi: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Novemba 2019	• 19 Comments
Ukuba ufunda isihloko seli nqaku, kungenzeka ukuba uyaphazama uzibuza ukuba ingaba le nto ibangelwa yintoni!? Ukuba ubekhe wanaka ingqalelo kule minyaka ingamashumi idlulileyo, unakho ukuphawula izinto ezimbini ezibalulekileyo. Besisoloko sizibona iinkampani okanye amashishini ehla ebhanga kwaye ethathwa ngamazwe […]
Nge-13 ngoJuni ndibhale inqaku elinesihloko esithi 'Ukudilizwa okuchaziweyo komkhiqizo' ekunene ', uTrump, uBrexit (nayo yonke into enxulumene nayo) uqalile'. Ngapha koko, akukho okuninzi okutshintshileyo. Ukudilizwa okwonakalisiweyo kwegama 'elakhiwe ngokuchanekileyo' kuguqukele ngokupheleleyo […]
Umcimbi 'wokuphelisa intela yokurhoxiswa kweerhafu' (uMarko Rutte) nokuqwalasela ukukhohlisa kwezopolitiko
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Aprili 2018	• 3 Comments
Ubungqina obuhle bombhalisi wezopolitiko ohleliweyo ukuba igama elithi 'umbhali' lithetha ukuba uluvo lwakho luyavumelana okanye 'luvumelana' nezopolitiko. Yingakho 'intetho' yinto ebangel 'umdla kwimbali. Uvava bathetha ngamanye amaxesha, abo bafundi beendaba kwiindaba okanye kwiNieuwsuur: "[...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 February 2018	• 11 Comments
Kuye kuthethwa rhoqo apha kwisayithi abapolitiki abenzayo kuphela abenza umdlalo ukukunika ukukhohlisa. UTyerry Baudet wayengumnatha omtsha wokukhusela abacinga ngokugqithisileyo; iqeqeshiwe kakuhle kwaye iqaliswe liziko likaKlingendael. Kuwo wonke umbala, iphunga kunye nenomdla kuluntu [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	2 Novemba 2017	• 6 Comments
Umbono wokubhenela uya kudoti, kuba akukho nto yenzeke kuyo kunye nomthetho we-drag (okanye 'ukuthatha umthetho') uqala ukusebenza. Nangona kuyenziwe ngathi konke oku kunzima kwaye ngathi kufuneka kubekho ikomiti yokubeka iliso, singatsho ukuba ii-Big Data server emva [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 969